एनसीसी बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषणः | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर एनसीसी बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषणः
मुख्य खबर, समाचार2views
एनसीसी बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषणः
एनसीसी बैङ्क लिमिटेडले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा रू. १६ करोड ४५ लाख नाफा आर्जन गरेको छ । यो गत आवको तुलनामा २७ दशमलव ५५ प्रतिशत बढी हो । रू. २३ करोड १४ लाख खराब कर्जा सङ्कलन गर्न बैङ्क व्यवस्थापन सफल भएपछि नाफा बढेको हो । सोही अवधीमा चुक्तापूँजी रू. ४ अर्ब ६७ करोड रहेको छ । यो गत आवको तुलनामा ९८ प्रतिशत बढी हो । तर बैङ्कको असार मसान्तको आधारमा सो पूँँजी स्थिर रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशन अनुसार रू. ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन बैङ्कको पूँँजी आधा वृद्धि गनूपर्ने देखिन्छ । बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ भने प्रतिशेयर आम्दानी रू. १४ दशमलव शून्य ७ रहेको छ ।
वर्गिकरणः वाणिज्य बैङ्क
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. ३६७
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. ६५२
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू.२९०
१८० दिनको भारित औसत मूल्यः रू.३६७.९९
अध्यक्षः उपेन्द्र केशरी न्यौपाने
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः रमेश राज अर्याल
प्रधान कार्यलयः सिद्धार्थनगर, काठमाडौं
स्टक सङ्केतः एनसीसीबी
बैङ्कको महत्वपूर्ण वित्तीय परिसूचकहरू (रू. हजारमा )
बैङ्कको पहिलोे त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दाः
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा ५ दशमलव ४८ प्रतिशतबाट घटेर ३ दशमलव ५२ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । हाल बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. ४ अर्ब ६७ करोड ९० लाख पुगेको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ९८ प्रतिशतले बढेको हो ।
जगेडा कोषको रकम ७७ प्रतिशतले बढेर रू. २ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख पुगेको छ भने लगानी रू. ८ अर्ब ५८ करोड ४५ लाख रहेको छ ।
बैङ्कले पहिलो त्रैमासमा आइपुग्दा रू. ६१ अर्ब ३८ करोड १२ लाख निक्षेप सङ्कलन गरी रू. ४८ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
रू. १ अर्ब ४९ करोड ४४ लाख ४६ हजार खुद ब्याज आम्दानी गर्दा रू. १ अर्ब २८ करोड १४ लाख ४७ हजार ब्याज खर्च गरेको छ । यो त्रैमासमा बैदेशिक विनिमयबाट रू. ८३ करोड ६१ लाख आम्दानी गरेको छ ।
बैङ्कको स्थिर सम्पत्ति रू. ६८ करोड ६४ लाख ४० हजार र अन्य सम्पत्ति रू. १ अर्व ८० करोड ७५ लाख २० हजार रहेको छ । रू. २३ करोड १४ लाख खराब कर्जा उठाउन बैङ्क व्यवस्थापन सफल भएको छ ।
सम्भावित जोखिमका लागि रू. ३ करोड ५७ लाखभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ ।
पूँजीकोष लागत ८ दशमलव २१ प्रतिशत र पूँजीकोष प्रर्याप्तता ११ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ ।
बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आवको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक १४ रूपैयाँ शून्य ७ पैसा, मूल्य आम्दानी २७ दशमलव २२, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य १ हजार ५ सय ४९ रूपैयाँ शून्य ४ पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ १ सय ५८ रूपैयाँ २३ पैसा रहेको छ । बुधवारको शेयर मूल्य नेटवर्थको २ गुणा छ ।
७ सेप्टेम्बर २०१७ ६ डिसेम्बर २०१७
मैनबत्ती बिश्लेषणः बैङ्ककोे ५५ दिनको कारोबारको अन्तिम दिन सेतो मारोबोजु आकृती बनेको छ । यस आकृतिले बैङ्कको शेयर मूल्य आगामी दिनमा बढ्ने सङ्केत देखाँउछ ।
आरएसआईः बैङ्कको ५५ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्युट्रल जोन (६४ दशमलव ८१ बिन्दुमा ) छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएसनः कम्पनीको ५५ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन १ दशमलव ३२ विन्दुमा छ । यसले उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ ।
मुभिङ एभरेजः बैङ्कको ५५ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्य रेखाभन्दा माथि छ । यदि हालको मूल्य रू. ३ सय ६७ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. ३ सय ७० मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने मूल्य सस्तिएमा रू. ३ सय ६३ मा टेवा पाउन सक्छ ।